Maxay Tahay Sirta ku duugan in ICJ diido doodda Soomaaliya oo qaadato midda KENYA? – hareerley News
Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa dib u dhigtay mar kale dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya ilaa June ee sanadka dambe.
Qoraal shalay kasoo baxay Maxkamadda ayaa lagu sheegay in ay tixgelisay codsiga Kenya, dibna u dhageysan doonto June 8 -12, 2020.
Baaritaan ay samaysay idaacadda Goobjoog ee Muqdisho ayaa lagu ogaaday in dadka hor socda kiiska badda ee matala dhanka Soomaaliya ay liitaan qareenno ahaan iyo siyaasiyiintaba.
Posted on May 6, 2020 May 6, 2020 Author Hareerley News
Aqalka Cad ayaa qorsheynayaa inuu todobaadyo gudahood uu ku soo afjaro shaqada guddiga ka hortagga Corona, iyadoo dalkaasi uu weli faro ba’an ku haayo xanuunka covid-19. Aqalka Cad ayaa wajahaya cadaadis ku aadan doorashada sanadkan dalkaasi ka dhici doonta iyo dhaqaalaha dhulka galay. Afar iyo labaatankii saacadood ee la soo dhaafay, in kabadan laba-kun iyo […]
Dowlada Kuwait Oo Albaabbada U Laabtay Masaajiddo
Posted on March 16, 2020 March 16, 2020 Author Hareerley News
(Kuwait ) Masuuliyiinta Dawladda Kuwait ayaa si ku meel-gaadh ah u Albaabada ugu laabay Masaajiddada, waxayna wax ka beddeleen sidii loo Aadaami jiray. Dawladda Kuwait ayaa xidhay Masaajiddadii ay Dadweynuhu Salaadda ku wada tukan jireen, waxaana xilliyada Salaadda Sameecadaha Masaajiddada ka baxa Aadaan la duubay, kaasi oo isaga laftiisa wax laga beddelay. Kalmadaha Aadaanku ka […]
Duqeymo Diyaaradeed Oo ka dhacay deegaano ka tirsan Sh/Hoose, Baay & Jubbada Hoose
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan duqeymo diyaaradeed oo xalay saqdhii dhexe ka kala dhacay degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan gobolada Sh/Hoose, Baay & Jubbada Hoose. Saraakiil Ciidan ayaa waxaa ay sheegeen in duqeymaha lala beegsaday Xarumo ay Al-Shabaab ku leeyihiin Deegaanka Kuunya-Barow ee Gobolka Shabeelaha Hoose,isla markaana lagu dilay Xubno […]